ဖြတ်ခြင်း။ သင်၏ ဦး နှောက်သည်ညစ်ညူးခြင်းဖြစ်သည် - rebooting နှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများ။
ထိုသွားရောက်ကြည့်ရှု ပြန်ဖွင့်အခြေခံ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူခြင်းအကြောင်းသင်ဘာတွေသိဖို့လိုသည်ကိုရှာဖွေရန်။ rebooting နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများ? ၏ရှည်လျားသောစာရင်းထွက်စစ်ဆေးပါ Rebooting & Porn အသုံးပြုမှုမကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများမရ။ သို့တည်းမဟုတ်သင်က compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (နောဧဘုရားကျောင်းမှပေးသောသင်တန်းများမှပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း) တို့ဖြင့်သင့်အားပြည့်စုံသော video course တစ်ခုလမ်းညွှန်ပေးလိုလျှင်၊ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ပိုများသောအကူအညီအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည် Change & Recovery အတွက် Tools (အသုံးဝင်သောနည်းစနစ်) ။ ပံ့ပိုးမှု Options ကို သင့်အားရရှိနိုင်သည့်ပံ့ပိုးမှုအမျိုးအစားများကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့တွင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖိုရမ်များ၊ အထောက်အကူပြုအုပ်စုများ၊ အက်ပ်များ၊ စာအုပ်များနှင့်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်သည်။
ညစ်ညမ်းသောအလုပ်၏လုပ်ငန်းခွင်များ (Covid 19 ၏လတ်တလောသက်ရောက်မှုများအပါအ ၀ င်) တွင်ညစ်ညမ်းသောအလုပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုစပ်စုလိုပါသလား။ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသုတေသနနှင့်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သောဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ.
အကြံဥာဏ် & လေ့လာတွေ့ရှိချက်များပြန်ဖွင့် နှင့် ပြင်ပ Rebooting ဖိုရမ်များ၊ ဘလော့များနှင့် Threads အဲဒီမှာပါပြီသောသူတို့အားအားဖြင့်အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်နှင့်ချည်၏ collection များကိုဖြစ်ကြသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်ရန်သင်၏ခရီးကိုထောက်ပံ့ပါ။ နေခြည် ပြန်လည်နာလန်ထူ Self-အစီရင်ခံစာများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ပြန်လည်ကောင်းမွန်င့်တဲ့သူတွေကိုကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ကြသောအရာကိုလေ့လာသင်ယူရန်: ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page 1, ပြန်ဖွင့် Accounts ကို 's Page2နှင့် ပြန်ဖွင့် Accounts ကိုစာမျက်နှာ 3.
အောက်ပါရှစ်စာမျက်နှာများ porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဖော်ပြတိုတောင်းပုံပြင်များဆံ့: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8။ ဤဆောင်းပါး၏အောက်တွင် -“အဆိုပါအခြား Porn စမ်းသပ်မှု“ ပြန်လည်နာလန်ထူပုံပြင် ၁၀၀၀ ကျော်ကိုဖတ်ပြီး“ rebooting သက်သာခွင့်။ ”
ဦးလေး Bob ၏ Recovery ကိုသိကောင်းစရာများ ကျပန်းအကြံပေးချက်များနှင့်လှုံ့ဆော်မှုရမယ့်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်အညီ, သင်တစ်ဦး chuckle လိုအပ်တယ်ဆိုရင်, သွားရောက်လည်ပတ် ဟာသ.
အဆိုပါ join reboot Nation ဖိုရမ် သက်တူရွယ်တူထောက်ခံမှုသည်။